नेपाल आज | अध्यात्म र विज्ञानका सेतू १११ वर्षे नेपाली बाबा
मेरो परिवार मेरो कथा प्रोफाइल कभर स्टोरी
पाशुपत क्षेत्रभित्रको आर्यघाट । जतिसुकै तेज गतिमा दौडिने जीवन पनि यहाँ नबिसाई प्रकृतिको कोर्स पूरा हुँदैन । दैनिक दर्जनौं नश्वर शरीर खरानी भइरहेका छन् । स्वजन बम्ह्लीन हुँदाको विक्षिप्त पीडामा छटपटिनेको संख्या पनि उत्तिक्कै छ । छोराले आफ्नै जन्मदिने बाबुलाई मुखाग्नि दिएर बिदाई गर्नुपर्ने अन्तिम सत्यको यो घाटलाई साक्षी बनाएर एउटा १ सय ११ वर्षको दिव्यपुरुष एक शताब्दीदेखि जीवनको जोड घटाउमा व्यस्त छ ।
यो उमेरमा पनि उसले जीवनको हिसाब मिलाउन सकेको छैन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा उसले जीवनको सपाट उत्तर पाएको छैन । कति जित्यो, कति हार्‍यो ? त्यसको पनि हिसाब किताब छैन । आत्मा र परमात्मालाई जोड्ने सेतू बनेर उभिएको त्यो अद्भूत पात्र डा. त्यागीनाथ अर्थात नेपाली बाबा मानवताको दीयो बालेर बसेका छन् ।
२४ घण्टा आँखा अगाडि मृत्युको विस्कुन देख्दा पनि उनको जडभरत व्यक्तित्वमा कुनै प्रभाव परेको छैन् । त्यसैले त जन्म र मृत्युलाई फगत प्रकृतिको पात्रोको रुपमा बुझेका छन् । भारतमा जन्मिएको एउटा बालक डा. रामनाथ अघोरीबाबाको नाम पछ्याउँदै काठमाडौं हानियो । रामनाथ अघोरी राजा त्रिभुवनका समेत गुरु थिए । गुरुभक्तिस्वरूप राजा त्रिभुवनले आश्रममा मन्दिर बनाइदिए, जुन अहिले पनि देख्न सकिन्छ । पशुपति आर्यघाटको सम्पूर्ण चिता तिनै अघोरीबाबाले बनाएका थिए । त्यसको जीर्णोद्धार र सुधारमा त्यागीनाथ बाबा अहिलेसम्म पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । तत्कालीन युवराज महेन्द्रलगायत राजपरिवारका सदस्यहरू बाक्लै आश्रममा आइरहन्थे । राजा महेन्द्रप्रति उनको विशेष श्रद्धा रहेछ ।
त्यो उत्साही किशोरलाई गुरुको मन जित्न कति पनि समय लागेन । अध्यात्म र विज्ञानलाई जोड्ने कडी खोज्दै दिनरात अध्ययन, चिन्तनमा लाग्यो । गुरुको सानिध्य र ठूलाबडाको संगतबाट माझिँदै गयो । अध्यात्म हुँदै उनको पठनपाठन आयुर्वेदिक उपचारतर्फ मोडियो । काठमाडौं र पटना आयुर्वेद कलेजमा उनले आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिको ज्ञान लिए । एकपटक आयुर्वेद विभागको निर्देशककी बुहारी गम्भीर बिरामी भइन् । लाइसेन्स थिएन । मौका चौका हान्दै उनले सर्त तेर्स्याए– मलाई लाइसेन्स दिनुस, म तपाईंकी बुहारी निको पारिदिन्छु । कुरो मिल्यो, त्यागीनन्दले डा. उपाधि पाए, निर्देशककी बुहारी तन्दुरुस्त भइन् ।
सानैदेखि बैराग्य लागेर घर छोडेका त्यागीनन्द एकपटक पनि घर फर्किएनन् । एउटा जीवन त्यागेर, अर्को जीवनमा प्रवेश गरेपछि काम, क्रोध, मोह त्याग्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । घर छोड्दा त्यागीनन्दका पिताको विहारमा आठ हजार विघा जग्गा जमिन थियो । सम्पत्ति त परै रह्यो, गृहस्थी गर्ने सोचसम्मले प्रवेश पाएन । नेपाली बाबा नामले भारतमा पनि उनको ठूलो ख्याती छ । लिनुको विकल्प दिनुलाई जीवनको दर्शन बनाएका नेपाली बाबाले लाखौं चन्दा दिएर धार्मिक थलोको जिर्णोद्धार र नवनिर्माण गरेका छन् ।
डाक्टर त्यागीनाथ बाबाको जीवन दर्शन आम मानिसको भन्दा पृथक छ । बाबाले पशुपतिनाथ, विराटनगर, सुनसरीको बराहक्षेत्र, जनकपुरधाम, धरानको पिण्डेश्वरीजस्ता धार्मिकस्थलमा आफ्नै सक्रियतामा थुप्रै भौतिक संरचना बनाएका छन् । सांसारिक मोहबाट टाढा भएका, घरपरिवार उहिल्यै छाडेका सन्तलाई हामीले सोध्यौं– तपाईंको आम्दानीको श्रोत चाहिँ के हो त ? उनले दयालु दाताहरू भएको बताए ।
बाबाका दिव्यदृष्टि ज्योति, आरोग्य दर्शन, मृत्यु विचार, नयाँ युग, रुद्राक्ष महत्वजस्ता ६ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । आफूलाई सम्झिएर आउनेको अहिले पनि निशुल्क उपचार गर्छन् । तर यस्ता कर्मयोगीले किन चेलाचपाटी जन्माएनन त ? किनभने उनलाई जीवनमा चेलाहरुको मोह भएन । विशेषणको जोगी भए पनि सस्ता र कर्महारा जोगीलाई घृणा गर्छन् । माछा, मासु, रक्सी, भाङ, धतुरोको सेवनले जोगी बिग्रिएको निष्कर्ष निकालेका नेपाली बाबा भन्छन् – जो भए पनि काम नगर्नेलाई माम दिनुहुन्न ।
नेपाली बाबा सिद्धहस्त तान्त्रिक हुन् । तन्त्रमा सिद्ध पाउन शुद्ध उच्चारण पहिलो सर्त भएको बताउँछन् । भूतप्रेत प्रति अलिकति पनि विश्वास छैन् । अघोरीबाबाका नाममा मान्छेको मासु खाने भनेर आतंक मच्चाउनेहरू प्रति उनको गम्भीर आपत्ति छ । उनी भन्छन् – यी सब नाटक हुन् । भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ र आफू एउटै सम्प्रदायको बताउने नेपाली बाबा भन्छन् – आदित्य मेरा भतिजा चेला पर्छन् ।
१ सय ११ वर्षसम्म स्वस्थ जीवन पाएका नेपाली बाबाको दीर्घजीवनको रहस्य के हो त ? एउटा चिकित्सकको नाताले कस्तो आहारविहारको सल्लाह दिनुहुन्छ ? डा. त्यागीनाथको दृष्टिकोण यस्तो छ ।
जोगीलाई सुरक्षाको चिन्ता ? यसोभन्दा अप्ठ्यारो सुनिन सक्छ । हो, नेपालीबाबा सुरक्षाका कारण तनावमा छन् । सस्ता मानिस आएर आफ्नो आश्रममा गर्ने सस्तो व्यवहार उनलाई विझाउन थालेको छ । यो काँडा पन्साइदिन जोकोहीसँग उनी अनुनय विनय गर्छन् । शताब्दी नाघेका यी आदर्णीय व्यक्तित्वको माग पूरा गर्नु जो कसैको धर्म हो ।
जोगी आर्यघाट डा. त्यागीनाथ पाशुपत क्षेत्र